Shan aragti oo Afrika ay ka qabto Trump - BBC News Somali
Farshaxaniiste u dhashay Kenya Evans Yegon ayaa sidan u sawiray Trump
Ilaa markii la doortay madaxwyne Muhammadu Buhari sannadkii hore, Nigeria waxay hagaajisay xiriirkii ay la lahayd Maraykanka, oo ay hore u dhaawaceen eedaymo Maraykanku u jeediyey ciidanka Nigeria oo uu ku eedeeyay in ay ku xad gudbeen xuquuqda aadanaha. Gaar ahaan dadkii ka soo cararayey mintidiinta Boko Xaraam. Ciidanka Nigeria wuxu ka helay tababar iyo qallab milatari ba maamulkii Obama waana hubaal in ay quuddarraynayaan in Trump uu sii wado xiriirka jira.
'' Dadweynaha Mareykanka ayaa sameeyay wax aan loo qaadan karin'' ayuu ciwaan ka dhigaty wargeys ka soo baxa Kenya oo lagu magacaabo Daily nation
Kooxdu waxay su'aal geliyeen sababta Maraykanku dagaal aanu ka guulaysanayn toban sannadood ugula jiro Alshabaab. Waxaanay sidoo kale su'aal geliyeen in lacagta Washington ku bixiso deeqda ee Afrika la siiyo si haboon loo adeegsado iyo in kale.
Muxuu Donald Trump balanqaaday inuu qabanayo 100-ka maalin ee ugu horaysa?
TOOS Afarta digniin ee ugu culus ee dowladda Soomaaliya loo diray
Iran oo sheegtay in waxyeelo wayn loo geystay xarunteeda Niyukleerka